Galaxy A31 နဲ့ A11 ဖုန်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူနိုင်ပြီ
တန်ဖိုးသင့် ဖုန်းအမျိုးစားတွေ ဖြစ်တဲ့ Galaxy A31 နဲ့ A11 မော်ဒယ်နှစ်မျိုးကို Samsung ပရိသတ်တွေနဲ့ ငွေကြေး ချွေတာ သုံးစွဲလိုသူတွေ အတွက် မိတ်ဆက်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဖုန်းနှစ်မျိုး အားသာချက်တွေ ဒွန်တွဲ ဖော်ပြသွားရင် Samsung ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အစီစဥ်ကိုလည်း ပြောသွားချင်ပါတယ်။
Galaxy A31 မှာ ဘာထူးခြားနေလဲ?
အရင်ဦးဆုံး Display ပိုင်းကနေ စရရင် 6.4” Super AMOLED Panel သုံးပေးထားပါတယ်။ 20:9 Aspect Ratio နဲ့အတူ Infinity-U Display နဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ အဆိုပါ A31 စမတ်ဖုန်းဟာ 1,080 x 2,400p မျက်နှာပြင်ကြောင့် Entertainment ပိုင်း အသုံးပြုဖို့ သင့်လျော်စေပါတယ်။
ထို့အတူ Dolby Atmos စနစ်နဲ့ ပံ့ပိုးထားတာကြောင့် ခေတ်လူငယ်တွေ တေးသီချင်းနားဆင် ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အပန်းဖြေနိုင်သလို ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း အားရစရာ Quad Rear Cameras (ကျောဘက် ကင်မရာ ၄ လုံး) တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Galaxy A31 (img: Samsung)
ပါဝင်လာတဲ့ Lens တွေ ပြောရရင် 48MP Main Camera ၊ 8MP Ultra-wide ၊ 5MP Depth Sensor နဲ့ 5MP Macro Lens တွေပါ။ Selfie အတွက်ကိုတော့ 20MP Lens ပံ့ပိုးထားပြီး အဆိုပါ ရှေ့ကင်မရာမှာ Live Focus လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
SoC ပိုင်းမှာ Octa-core အမျိုးစား ထည့်သွင်းပေးထားပြီး 4GB RAM (သို့) 6GB RAM ၊ Storage ပိုင်းမှာလည်း 64GB (သို့) 128GB စသဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး 15W Speed နဲ့ အားသွင်းနိုင်မယ့် 5,000 mAh Battery ထည့်ပေးထားပါတယ်။
A31 မှာ Under Display Fingerprint Sensor အသုံးပြုထားပြီး USB Type-C ၊ Headphone Jack တို့ ပါဝင်လာပါတယ်။ ရရှိနိုင်မယ့် အရောင်တွေက Prism Crush Black ၊ Prism Crush White နဲ့ Prism Crush Blue တို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာငွေ ၃၉၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
6.4” Screen နဲ့ပဲ ရရှိနိုင်မယ့် A11 ကတော့ Panel ပိုင်း ကွာခြားမှုရှိပြီး TFT LCD Display နဲ့ ရရှိမှာပါ။ A31 နဲ့မတူတဲ့ နောက်တစ်ချက်က Punch-hole Notch နဲ့ ပွဲထွက်လာတာဖြစ်ပြီး LCD Panel ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Rear Mounted (ကျောဘက်မှာ) ပါဝင်တဲ့ Fingerprint Sensor ကို သုံးပေးထားပါတယ်။
A11 Display ဟာ 81.6 Screen-to-body Ratio ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး 720 x 1,560p Resolution အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ Triple Setup ပါဝင်ထားပြီး 13MP Primary ၊ 5MP Ultra-wide နဲ့ 2MP Depth Sensor တို့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Galaxy A11 (img: Samsung)
Selfie အတွက်ကိုတော့ 8MP Lens သုံးထားပြီး အဆိုပါ ရှေ့ကင်မရာမှာ Smart Selfie Expression လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်လာမှာပါ။ SoC ပိုင်းမှာ 1.8GHz မြန်နှုန်းရှိ Octa-core Processor သုံးထားသလို 2GB RAM ၊ 32GB Storage တို့ ပါဝင်မှာပါ။
A31 နည်းတူ 15W Fast Charging စနစ်ပါရှိပြီး 4,000 mAh Battery အသုံးပြုထားတဲ့ A11 စမတ်ဖုန်းကို မြန်မာငွေ ၁၉၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။ ရရှနိုင်မယ့် အရောင်တွေက အပြာ ၊ အနက်နဲ့ အဖြူတို့ဖြစ်ပြီး A31 နဲ့ A11 အားပေးသူများအတွက် အထူး အခွင့်ရေးကိုလည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Special Offer က ဘာတွေလဲ?
Galaxy A31 ဝယ်ယူသူများ အနေနဲ့ 10GB Mytel အင်တာနက် အစီစဥ်နဲ့ Mytel အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှုအတွက် မိနစ် ၁၀၀ အခမဲ့ တစ်ကြိမ် ၊ A11 အတွက် 4GB Mytel အင်တာနက် အစီစဥ်နဲ့ မိနစ် ၄၀၀ အခမဲ့တစ်ကြိမ် ခံစားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် No Worry Crack ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ထားပြီး စမတ်ဖုန်း ဝယ်ယူပြီးသည့် နေ့မှ ၆ လအတွင်း မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အရှေ့ဖက် မျက်နှာပြင် ပျက်ဆီးခြင်းအတွက် ပစ္စည်းနဲ့လက်ခ ခံစားခွင့်ကို A31 တွက် 50% ၊ A11 တွက် 40% ပေးအပ်ထားပါတယ်။ (Expire Date က 2020 ဒီဇင်ဘာအထိပါ)
Galaxy A31 & Galaxy A11 Official Homepage
Samsung Myanmar Press Release အား တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။